Iprokhor Chaliapin yamangalisa ubuhlobo obutsha nomfazi wakhe omdala, ividiyo
Ngelixa bekhumbula malunga nomculi, uhlala efuna. Nangona inkwenkwezi ayinanto yokuziqhayisa ngemigangatho yokudala, iya kumenywa kuzo zonke iintlobo zokubonisa iintetho kunye nephepha elibomvu. Ufuna ukuzikhumbuza ngezikhathi ezithile. Dumisani lowo owasungula i-Instagram. Ngoku abahlali abalibeleyo banokuzonwabisa ngokubeka iifoto ezintsha kunye namavidiyo apho, ukuphoqa iNethiwekhi ukuba ikhulume ngokwabo.
U-Natalia Sturm kunye no-Alain Apina baqhubise abasebenzisi be-Intanethi ngefotos photo shootings, u- Anna Kalashnikova , ekubeni sele banqume ukugqiba yonke into, kubonakala kwikhephethi ebomvu nge "indlebe" ezithembekileyo ... Iprokhor Shalyapin, owayengumngane we-Anna Kalashnikova, uvuselela umdla kumntu wakhe ngendlela eqinisekisiweyo. Njengoko uyazi, umculi akhathalelekanga kwabesetyhini abaye bawela uphawu lweeminyaka engama-50. Nantsi uAndrei Zakharenkov (igama langempela lomculi) kwaye wagqiba ekubeni enze i-PR kwakhona.
Ingaba abahlala phantsi bephelile kwisithili, okanye umculi wagqiba ekubeni angaphambuki kwiimeko ezicingayo, kodwa kwi-Instagram yakhe imizuzu embalwa edlulileyo ividiyo yabonakala ... kunye noLarissa Kopenkina. Kwaye abafazi ababesele badibana nabangasetyenziswanga, kodwa eholide.
Abafaki ba Prokhor Chaliapin bajonge phambili umtshato omtsha noLarisa Kopenko
Kwaye nabalandeli abathembekile baseChaapap endala balahleka, bazama ukulandelela zonke iinkqubo, apho wafumanisa ubuhlobo kunye nomfazi wakhe wangaphambili. Le projer yehlobo ichitha iiveki ezimbalwa eSochi.
Ngelo xesha, kwakukho umfazi wakhe owayengumfazi wokuqala uLarissa Kopenkina.
Abasebenzisi be-Instagram ngoJulayi bacingela ukuba isibini sihlala kunye, kodwa akukho Prokhor okanye uLarissa wayenokukhawuleza ukucacisa imeko.
Kwaye emva koSochi, esi sibini savakalisa intetho elandelayo, apho baphinda bafumanisa ubuhlobo phambi kwabaphulaphuli.
Kwaye ngoku kuvela ukuba iCopenkina neShalyapin inene ikhefu ehlobo. Prohor uthunyelwe kwividiyo ye-microblogging, ebonisa indlela yena nomfazi wakhe owayengumfazi okhuphuke ngayo eNtaba yaseAkhun:
Ababhalisi Ukuthi uShaleyapin akazange bamangaliswe kukuba waphinde waqalisa ubudlelwane bakhe noKopenkina. Abalandeli bajonge ngokulangazelela ukuqhubeka kwebali elidala:
Irishechkakiss Hlalani siqhubeke! Kuvuyiswa kukujonga
_show_business_ Sifuna ukuqhubeka
mr.alexnikolaev Kubonakala ngathi enye i-PR eninzi izayo
vera.vera13 Ndiyiphi umtshato?
korolevaolga12 Uyiqabane elipholile kunazo zonke kwi-show-Biz. 👫Nation ifuna umtshato omkhulu !!!! 🔥🔥🔥
Ndiyabuza ukuba yeyiphi inkqubo eya kuba ngowokuqala ukufumana le mbhangqwana ehlekisayo emoyeni? Siyabona kwiZen le ngcaciso 👍 kwaye sihlala siyazi zonke iinjongo kunye neentlanzi zezoshishino.
U-Natalia Friske ubonise kwiimifanekiso ze-Instagram zePlato
U-Evgeny Tsyganov noYulia Snigir baphuma kunye emva kokuzalwa komntwana
Ukutshatyalaliswa kwefestile: Iimpawu ze-Elena Temnikova zithukuthele i-Instagram
Le fasco: Olga Buzova ihlazo, ayikwazi ukufunda ngokufanelekileyo imifanekiso, ividiyo
Abadlali bamaRussia abaParalympiki abavunyelwe ukuba benze eRio de Janeiro
Ungayifaka njani umntwana wakho uthando lokucoceka?
Indlela yokuchaza isandla xa utshata: Izifundo zesundu
Ubugcisa bempi yeeholide ka-Meyi 9 kubafundi besikolo ngeendlela ezahlukeneyo
Iresiphi yonyaka omtsha yesibindi sesibindi
Ukupheka kunye neengcebiso malunga nendlela yokupheka khinkali
I-single-compressor kunye nefriji-compressor yefriji - yintoni umehluko?
Ama-sandwich ngeeshizi, ham kunye nepeyari
Ikhofu - umzimba omuhle wesifazana